Waa Kuwee TOBANKA Ciyaartoyda Ee Maanta Oo Talaado Ah Loogu Hadal-Heynta Badan Yahay Suuqa Kala Iibsiga? Halkaan Ka Aqriso Liiska Oo Dhameystiran. - Laacib.net
Waa Kuwee TOBANKA Ciyaartoyda Ee Maanta Oo Talaado Ah Loogu Hadal-Heynta Badan Yahay Suuqa Kala Iibsiga? Halkaan Ka Aqriso Liiska Oo Dhameystiran.
Salamu calaykum waraxmatulaah, Ramadaan Kariim dhamaan akhristayaasha sharafta iyo ixtiraamka naga mudanow ku soo dhawaada barnaamujkeenii tobanka ciyaartoy ee ugu qiimaynta sareeya suuqa kala iibsiga ciyaartoyda ee maanta oo Talaado ah kuwaas oo inta ugu badan looga hadlay suuqa kala iibisaga isla markaana lala xiriirinayo kooxo cusub. Suuqa kala iibisaga ciyaartoyda ayaa si rasmi ah u furmaya 1-da July waxayna koox kastaaba si hordhac ah ugu dadaaleysaa iney hesho saxiixyo cusub.
Ciyaariyahankii hore Barcelona – Sandro Ramirez ayaa qarka u saaran inuu ku biiro Everton, isagoo kasoo tagaya Malaga, wuxuu noqday ciyaariyahanka kaliya ee kaalinta 1-aad ka qabsaday Jermain Defoe oo muddo ugu horeeyay.
Jermain Defoe wuxuu soo galay maanta kaalinta labaad madama sheekadiis iyo sida ay u dhamaan doonto aan la ogeyn walow wali lagu qiimeeyo in heshiiskiisa uu dhaw yahay.
Theo Hernandez wey dhawdahay sheekadiisa, waxaana la filayaa in todobaadkaan lasoo afjaro, halka Mohamed Salah rajada laga qabo inuu Liverpool aad ay maanta aad u sareyso maadama lagu soo waramay inuu usoo duulay England.
Gerard Deuloefeu ayaa dib ugu laabanaya Barcelona iyagoo 10 Malyan oo Pound kaliya dib ugula wareegi kara waa iney soo dhameeyaan ka hor dhamaadka bishaan.
Alvaro Morata ayaa isna lala xiriirinayaa Man United wali inkastoo Perez uu xaqiijiyay inuusan wax dalab ah ka helin United.